Izindaba - Umlando we-PTFE
Umlando we-POLYTETRAFLUOROETHYLENE waqala ngo-Ephreli 6, 1938 eDu Pont's Jackson Laboratory eNew Jersey.Ngalolo suku lwenhlanhla, uDkt. Roy J. Plunkett, owayesebenza ngamagesi ahlobene neziqandisi ze-FREON, wathola ukuthi isampula elilodwa lalifakwe i-polymerised ngokuzenzakalelayo libe okuqinile okumhlophe, okunama-waxy.
Ukuhlolwa kwabonisa ukuthi lokhu okuqinile kwakuyinto ephawuleka kakhulu.Kwakuyinhlaka eyayimelana cishe nawo wonke amakhemikhali noma isincibilikisi esaziwayo;ubuso balo babushelela kangangokuthi cishe akukho lutho olwalunganamathela kulo;umswakama awuzange ubangele ukuthi ikhukhumale, futhi ayizange yehlise izinga noma ibe brittle ngemva kokuchayeka elangeni isikhathi eside.Yayinephuzu lokuncibilika elingu-327°C futhi, ngokuphambene ne-thermoplastics evamile, yayingeke igeleze ngaphezu kwaleyo ndawo yokuncibilika.Lokhu kwakusho ukuthi amasu amasha okucubungula kufanele athuthukiswe ukuze afanele izici ze-resin entsha - uDu Pont ayiqamba ngokuthi i-TEFLON.
Amasu okuboleka ku-powder metallurgy, onjiniyela bakwa-Du Pont bakwazi ukuminyanisa kanye ne-sinter POLYTETRAFLUOROETHYLENE ama-resin abe amabhulokhi ayengenziwa ngomshini ukuze enze noma yisiphi isimo esifiswayo.Kamuva, uhlaka lwenhlaka emanzini lwasungulwa ukuze lwembeswe indwangu yengilazi futhi lwenze iziqweqwe.Kwakhiqizwa impushana eyayingahlanganiswa ne-lubricant futhi ikhishwe ukuze kuhlanganiswe ucingo futhi kwenziwe amashubhu.
Ngo-1948, iminyaka eyi-10 ngemuva kokutholakala kwe-POLYTETRAFLUOROETHYLENE, uDu Pont wayefundisa ubuchwepheshe bokucubungula kumakhasimende akhe.Ngokushesha isitshalo sezentengiselwano sase sisebenza, futhi izinsalela ze-POLYTETRAFLUOROETHYLENE PTFE zatholakala kuma-dispersions, ama-granular resins kanye nempushana enhle.
Kungani ukhetha i-PTFE Hose?
I-PTFE noma i-Polytetrafluoroethylene ingenye yezinto ezimelana namakhemikhali kakhulu ezitholakalayo.Lokhu kwenza amapayipi e-PTFE aphumelele phakathi kwezimboni eziningi lapho amapayipi ensimbi noma enjoloba engokwesiko angase ahluleke.Bhangqa lokhu kanye nebanga lokushisa elihle kakhulu (-70°C ukuya ku-+260°C) futhi ugcina usunepayipi eliqinile elikwazi ukumelana nezindawo ezilukhuni kakhulu.
Izakhiwo ezingakhubeki ze-PTFE zivumela amazinga okugeleza athuthukisiwe lapho kuthuthwa izinto ezibonakalayo.Lokhu kuphinde kufake isandla ekwakhiweni okuhlanzeke kalula futhi kudala ulayini 'onganamathela', oqinisekisa ukuthi umkhiqizo osele ungazikhipha noma uvele uguguleke.